चीनको आफ्नै स्पेस स्टेसन अहिलेसम्म यस्तो बनायो ? «
चीनको आफ्नै स्पेस स्टेसन अहिलेसम्म यस्तो बनायो ?
प्रकाशित मिति : १९ जेष्ठ २०७८, बुधबार ०८:०६
चीनले यहीँ जुन महिनामा आफ्ना ३ जना अन्तरिक्ष यात्रीहरुलाई ३ महिने बसाइँका लागि निर्माणाधीन चिनियाँ अन्तरिक्ष स्टेसनमा पठाउने घोषणा गरिसकेको छ । आफ्नो एक मालबाहक अन्तरिक्षयान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरी स्पेस स्टेसनमा जोडिएको एक दिनपछि चीनले यस्तो घोषणा गरेको थियो ।
पृथ्वीको कक्षमा हाल रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनले सन् २०२४ बाट काम गर्न छाड्नेछ । त्यसैले त्यसबेला चिनियाँ स्पेस स्टेसन तियान्हे नै सायद एक्लो अन्तरिक्ष स्टेसनको रूपमा पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेको हुनेछ ।
जिल्ला सदरमुकामसमेत रहेको नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व)को कावासोती नगरपालिले घरको नक्सा दर्ता तथा स्वीकृत अनलाइन प्रक्रियाबाट सुरुआत